ब्रान्ड फर्नीचर, गुणस्तर सु: निश्चितता
सोफा ओछ्यान, सोफा, recliners, अनुभागीय सोफा, गद्दा र आधुनिकको साथ ओछ्यान फ्रेम, युरोप, चेस्टरफील्ड शैली
ओभर 35 विश्वसनीय ODM र OEM अनुभव को वर्ष
बाओटियन फर्नीचर कं, लिमिटेड.
बाउटियन फर्नीचर कं, लिमिटेड. मा स्थापना भएको थियो 1985 र Shunde मा स्थित, Foshan शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त. हामीले एउटा क्षेत्र कभर गर्दैछौं 50,000 वर्ग मीटर र बारे मा दर्ता राजधानी2मिलियन अमेरिकी डलर.
बाओटियन सोफा बेड निर्माता सोफा उत्पादन गर्न विशेष गरिएको छ, सोफा ओछ्यान, इलेक्ट्रिक रिलिनर, गद्दा र ओछ्यान फ्रेम. हामी होटल प्रोजेक्टमा सहयोगी छौं, थोक, र खुद्रा विक्रेताहरू.
तपाईले उच्च घनत्व फोमको साथ ब्याकरेस्ट आकृति बनाउनुहुन्छ जुन तपाईंलाई नरम र समर्थन पनि बनाउँदछ. गाढा खैरो मखमली कपडा सफा गर्न सजिलो हुनेछ. सुव्यवस्थित आर्मरेट्स डिजाइन विभिन्न उचाई भोजन टेबलसँग मिल्नु पर्छ. ठोस काठ कुर्सी आधार जसले सेवा जीवन अधिक लामो र एकीकृत डिजाइन गर्दछ.
अ style्ग्रेजी शैली एल आकारको फेब्रिक काउच बैठक कोठा शाही सेक्शनल सोफा. अंगूर बैजनी, रोमान्टिक र सुरुचिपूर्ण, अंगूर दाखमद्यको घाँस चाखेर रमाइलोको साथ उत्तम खेल. समायोज्य हेडक्रिट्स तपाइँको मांग मा उपज, हटाउनुहोस् वा राख्नुहोस् जब तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ. सिट कुशनमा स्टेनलेस स्टील फ्रेम र जेब्ट स्प्रि safety्ग ले सुरक्षा र रमाईलो आसन भावना सँगै ल्याउँदछ.
चेस्टरफील्ड सोफा चेसको साथ हाम्रो हल्का र नरम अरू भन्दा छ, जुन नियमित क्लासिक चेस्टरफील्ड सोफामा लिन्छ. हामी पुरानो शैलीको डिजाइन अपनाउँछौं तर यसलाई अधिक आधुनिक भावना दिएका छौं. चेस्टरफील्डको tufting प्रकार मा आधारित, हामी यसको परम्परागत भारी आकार परिवर्तन गर्न कोसिस गर्छौं.
आधुनिक बैजनी रंगको साथ आधुनिक चेज लाउंज सोफा - आलस्य रहस्यमय अझै आकर्षक मनमोहक. ठोस काठको खुट्टाले शक्तिशाली समर्थन प्रस्तुत गर्दछ. आरामदायी अनुभूतिले जेबमा स्प्रि se प्रयोग गरी यस्तो सोफे राख्ने काम गर्दछ & उच्च घनत्व स्पंज.
कालो छालाको भण्डारण ओछ्यान एउटा सानो बेडरूमको लागि छनौट गर्न राम्रो छ किनकि यसले सँधै यसलाई नेत्रहीन विस्तार गर्दछ र कामुक हल्का पार्दछ. यो कालो एक शैली र एक मजबूत quilting हेडबोर्ड साथ साथै पूरै भण्डारण बक्सहरू लुक्छ ग्लैमर संयोजन गर्दछ.
चेस्टरफील्ड डिजाइन कालो कपडा कर्नर काउच, आधुनिक, सफा, र फेसन. एक ठूलो जेब कुंडली सीट कुशनको टुक्रा यति सहज र नरम हुन्छ. चल डिजाइन सफा गर्न को लागी सजिलो छ. गोल्डन मेटल बटन र स्टेनलेस स्टील खुट्टा सोफा डिजाइन अधिक रमणीय बनाउँदछ.
3 सिटर फेब्रिक सोफा ओछ्यान, बेल्जियम ब्रान्ड मेकानिजमेसन बिस्तर फ्रेमको साथ. कडा राउन्ड पाइपिंग धातु फ्रेम, जेब वसन्त गद्दा संग: 143*195*12सेमी. एक चरण खोल्ने सोफा ओछ्यान अधिक सुविधाजनक र ह्यान्डल गर्न सजिलो छ.
होटल फर्नीचर आधुनिक शैली सामान्य प्रयोग उल्ट्याउन सीट कुशन सोफा ओछ्यान। सोफा बिस्तर माथि प्रयोग गरेर 500 अमेरिकी ब्रान्ड. वर्ग पाइपिंग श्रृंखला मेकानिजमेन्टले बिभिन्न होटेल र परिवारहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न कडा समर्थन प्रदान गर्दछ. मानक पकेट वसन्त गद्दा आकार: 90/130*185*12सेमी.
समकालीन कुनाका सोफा उनीहरूको समायोज्य आकार र आरामदायक कुनाहरू तिनीहरू संलग्नको कारण बढ्दो लोकप्रिय छ. यदि तपाईं केहि खोज्दै हुनुहुन्छ जुन एउटा chaise र एक कुना सोफा बीच सही सन्तुलन प्रहार गर्दछ, हाम्रो बाओटियन फर्निचर विचार गर्नुहोस्. यो विशाल सोफामा सबै परिवारका लागि पर्याप्त दिक्कको साथ पर्याप्त ठाउँ छ. खरानी फैब्रिक अपहोल्स्ट्रीले डिजाइनमा विलासिताको अतिरिक्त टच थप्दछ. त्यहाँ मखमल जस्तै धेरै उपलब्ध छन् यदि तपाईं फेब्रिकलाई मन पराउनुहुन्न भने वरिपरि पसल छ।.